Rob-B-Hood (2006) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ဂကျြကီခနျြးရဲ့ အောငျမွငျတဲ့ကားတှထေဲက တဈကားဆိုလညျးမမှားပါဘူး..
ကွညျ့ရငျးနဲ့လညျး ရယျရတဲ့အခိုကျအတနျ့ဖွဈလာရသလို သံယောဇဉျဆိုတာ ဖွတျတောကျဖို့မလှယျဘူးဆိုတာကို
ကလေးတယောကျကို ခဈြတဲ့ သူခိုးကွီး၂ယောကျအသှငျ သရုပျဆောငျပွသှားပါတယျ..
Thongs (ဂကျြကီခနျြး)နဲ့ Octopus(Louis Koo)တို့က Professional သူခိုးတှပေါ… ဒါမယျေ့ သူတို့သူခိုးမှာလညျး ထားတဲ့ သစ်စာဆိုတာရှိပါတယျ… သူခိုးပမေဲ့ လူမသတျဘူး.. သူမြားသားမယားမဖကျြစီးဘူး. .ပွီးတော့ သကျမဲ့ပစ်စညျးပဲ ခိုးကွတာပေါ့ ..
တဈနေ့ ကွမျးကွမျးတမျးတမျးနဲ့ ဘဝကို ဖွတျသနျးနတေဲ့သူတို့၂ယောကျ နူးညံ့တဲ့ကလေးတယောကျကို ရုတျတရကျကွီး ပွနျပေးဆှဲဖွဈသှားတဲ့ အခါ………
သံယောဇဉျနဲ့မတ်ေတတရားရယျလို့ မသိခဲ့တဲ့ လူကွမျးကွီးနှဈယောကျ လသားအရှယျကလေးလေးကိုထိနျးရငျး ဘယျလိုဒုက်ခရောကျခဲ့ရတယျဆိုတာကို ဟာသနှောပွီး ရိုကျပွထားသလို … ကလေးလေးနဲ့ ခှဲရမယျ့အခါမှာလဲ မကျြရညျလညျလောကျအောငျ ဇာတျလမျးဆငျပေးထားပါတယျ..
IMDb rating 6.7 ရရှိထားပွီး 2006 ခုနှဈရဲ့ Chinese Box Office မှာ ထိပျဆုံးအဆငျ့ကရပျတညျခဲ့တဲ့ကားဖွဈပါတယျ…
ဂျက်ကီချန်းရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ကားတွေထဲက တစ်ကားဆိုလည်းမမှားပါဘူး..
ကြည့်ရင်းနဲ့လည်း ရယ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်လာရသလို သံယောဇဉ်ဆိုတာ ဖြတ်တောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာကို
ကလေးတယောက်ကို ချစ်တဲ့ သူခိုးကြီး၂ယောက်အသွင် သရုပ်ဆောင်ပြသွားပါတယ်..
Thongs (ဂျက်ကီချန်း)နဲ့ Octopus(Louis Koo)တို့က Professional သူခိုးတွေပါ… ဒါမေယ့် သူတို့သူခိုးမှာလည်း ထားတဲ့ သစ္စာဆိုတာရှိပါတယ်… သူခိုးပေမဲ့ လူမသတ်ဘူး.. သူများသားမယားမဖျက်စီးဘူး. .ပြီးတော့ သက်မဲ့ပစ္စည်းပဲ ခိုးကြတာပေါ့ ..
တစ်နေ့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတို့၂ယောက် နူးညံ့တဲ့ကလေးတယောက်ကို ရုတ်တရက်ကြီး ပြန်ပေးဆွဲဖြစ်သွားတဲ့ အခါ………
သံယောဇဉ်နဲ့မေတ္တတရားရယ်လို့ မသိခဲ့တဲ့ လူကြမ်းကြီးနှစ်ယောက် လသားအရွယ်ကလေးလေးကိုထိန်းရင်း ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ဟာသနှောပြီး ရိုက်ပြထားသလို … ကလေးလေးနဲ့ ခွဲရမယ့်အခါမှာလဲ မျက်ရည်လည်လောက်အောင် ဇာတ်လမ်းဆင်ပေးထားပါတယ်..
IMDb rating 6.7 ရရှိထားပြီး 2006 ခုနှစ်ရဲ့ Chinese Box Office မှာ ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကရပ်တည်ခဲ့တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်…
Andrew Lin Asuka Higuchi Bonnie Wong Candice Yu Charlene Choi Chen Baoguo Cherrie Ying Choy Tak-Kwan Christian Kila Chung Ka-Lung Conroy Chan Daniel Wu David Lee Ka-Yan Don Li Eddie Che Wai-Yin Fong Chi-Kui Gao Yuanyuan Gill Mohindepaul Singh Gordon Lam Hiro Hayama Ho Yat-Wah Hui Siu-Hung Jackie Chan Jason Tobin Joe Cheung Johnny Cheung Wa Jonathan Lee Yat-Sing Ken Lo Ken Wong Ku Feng Leo Lo Hoi-Ying Ling Chi-Man Lisa S. Louis Koo Luk Man-Wai Mandy Chiang Matthew Medvedev Michael Hui Mike Moh Nicholas Tse Nicky Li Chung-Chi Paco Yick Tin-Hung Sam Kai-Sen Huang Terence Tsui Chi-Hung Terence Yin Teresa Carpio Tony Ho Tsui Kin-Wah Victy Wong Vincent Chik Miu-Chan Winnie Leung Wong Chi-Wang Wong Man-Kin Wong Pak-To Wong Yuk-Man Yuen Biao
Option 1 server.mfile.cloud 599 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 599 MB SD (480p)
Option4yuudrive.me 599 MB SD (480p)
Option 10 server.mfile.cloud 3.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1